အသက် ၃၀ အရွယ်ရောက်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ စတင်နိုင်မလဲ….
8 Feb 2018 . 5:54 PM
အသက်အရွယ်ရလာရင် ဇရာဆိုတာကို အံတုလို့မရပါဘူး။ အသက်တဖြည်းဖြည်းကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှ လူတိုင်းမှာလည်း အိုမင်ခြင်းဇရာနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ အသက်ငယ်ရွယ်နုပျိုနေစဉ်မှာ ဒီလိုမျိုး အိုမင်းခြင်းနဲ့ ပြောင်းလဲခြင်းတွေမရှိသေးပေမယ့် အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုရင်လည်း ပြောင်းလဲမှုတွေကို မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ဒါကို ဇရာလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ အသက် ၃၀ အရွယ်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲဆိုတာ စာဖတ်သူတွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…
ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်လုပ်ဆောင်မှုတွေ လျော့ကျလာစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကျားမမရွေး အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းနဲ့အတူ ပြောင်းလဲလာနိုင်တဲ့ ကိုယ်တွင်းဖြစ်စဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်တွေနှေးကွေးသွားလို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာလိုအပ်တဲ့ အင်အားတွေ၊ စွမ်းအင်တွေဟာလည်း နှေးကွေးစွာ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ အင်အားကုန်ခမ်းတာ၊ အားနည်းတာ၊ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းလာမှုတွေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အရိုး၊ ကြွက်သားနဲ့ အရွတ်တွေမှာ အားနည်းခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာသူတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တာက အရိုးတွေပျော့လာတာ၊ အရိုးချဉ်ဆီတွေ ခမ်းသွားတာ၊ အရိုးတွေပါးလာတာမျိုးတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒူးခေါင်း၊ ခါး၊ ခြေလက်၊ တံတောင်တွေမှာရှိနေတဲ့ အရိုးအဆစ်နေရာတွေက အရွတ်တွေမှာပါးခြင်း၊ အဆီခမ်းခြောက်ခြင်းတွေကြောင့် ကွေးနိုင် ဆန့်နိုင်တာမျိုးတွေ လှုပ်ရှားမှုအားနည်းသွားပါတယ်။ နောက်ပြီး အရိုးတွေ တဖြည်းဖြည်းပါးလာတဲ့အခါမှာလည်း ကျိုးလွယ်၊ ထိခိုက်လွယ်သွားလို့ အသက်ကြီးလာသူတွေမှာ ချော်လဲတာ၊ ပြုတ်ကျတာမျိုးတွေဆိုရင် တော်ရုံနဲ့ ပြန်လည်နလန်မထူနိုင်တော့ပါဘူး။
အရေးအကြောင်းတွေဖြစ်လာတာ၊ အရေပြားတွန့်လာတာမျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ် အရေပြားများ တွဲကျခြင်း၊ အရေပြားကြွက်သားများ လျော့ရဲကျခြင်းတွေက လူကြီးတွေနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေမှာ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ အသက် ၃၀ အရွယ်ရောက်လာတဲ့ သက်လတ်ပိုင်းလူတိုင်းမှာ မျက်နှာပြင်ပေါ်အရေးအကြောင်းနဲ့ အရေပြားတွန့်လာတာတွေကို စတင်ပြီး သတိထားမိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဇရာနဲ့ အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်းကို ပြသနေတဲ့ အနီးစပ်ဆုံးလက္ခဏာပါပဲ။
အမျိုးသမီးတွေမှာ အသက် ၃၀ နဲ့ ၃၅ နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါ မျိုးပွားသန္ဓေသားအောင်မှုနှုန်း ကျဆင်းသွားတတ်တာကို သတိထားသင့်ပါတယ်။ အချို့သော အိမ်ထောင်သည်တွေမှာဆိုရင် ကလေးနောက်ကျမှယူဖို့အတွက် အသက် ၃၀ ကျော်ဆိုတဲ့အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းတတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ သိပ်ကို သတိထားဆင်ခြင်ရမယ့် အချက်ပါပဲ။ ကလေးယူဖို့အတွက် မျိုးပွားသန္ဓေအောင်မှုအမြင့်မားဆုံးဟာ အသက် ၂၀ နဲ့ ၃၀ ဝန်းကျင်မို့ အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ လိုချင်တိုင်း ကလေးမရနိုင်တော့ပါဘူး။ အမျိုးသမီးဟော်မုန်းဓာတ်ကျဆင်းခြင်းနဲ့ သန္ဓေအောင်မှုတွေ ကျဆင်းသွားတဲ့အခါ ကလေးရဖို့ ခက်ခဲသွားပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှုများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ ခံစားလာရတတ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ခံစားချက်ပြင်းထန်လွန်းတာကြောင့်ဖြစ်စေ အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်မှာဆိုရင် စိတ်ဖိစီးမှုများကို ပိုမိုခံစားတတ်ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုနှေးကွေးခြင်းကြောင့်လည်း စိတ်ခံစားမှုပြဿနာတွေကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒေါသထွက်တာ၊ စိတ်ခံစားချက်လွန်ကဲတာ၊ စိတ်ဓာတ်အတက်အကျများတာတွေက အသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်မှာ အဖြစ်များပါတယ်။
ကဲအသက် ၃၀ ကျော်အရွယ်ရောက်ရင် ဒါတွေကအဖြစ်များလို့ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေကို ရှာမှီးပြီး အသက်အရွယ်ရလာတဲ့အခါမှာ ကျန်းမာရေးကောင်းနေစေဖို့အတွက် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ကာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့ ဘဝကိုပျော်ပျော်ကြီး ဖြတ်သန်းကြရအောင်။
အသကျ ၃၀ အရှယျရောကျလြှငျ ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘယျလိုပွောငျးလဲမှုတှေ စတငျနိုငျမလဲ….
အသကျအရှယျရလာရငျ ဇရာဆိုတာကို အံတုလို့မရပါဘူး။ အသကျတဖွညျးဖွညျးကွီးပွငျးလာတာနဲ့အမြှ လူတိုငျးမှာလညျး အိုမငျခွငျးဇရာနဲ့ ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲမှုတှလေညျး ရှိလာပါတယျ။ အသကျငယျရှယျနုပြိုနစေဉျမှာ ဒီလိုမြိုး အိုမငျးခွငျးနဲ့ ပွောငျးလဲခွငျးတှမေရှိသေးပမေယျ့ အသကျအရှယျရလာတဲ့အခါမှာတော့ ကိုယျခန်ဓာအစိတျအပိုငျးပွောငျးလဲခွငျးတှေ စတငျဖွဈပျေါလာပွီးတော့ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာမှာဆိုရငျလညျး ပွောငျးလဲမှုတှကေို မွငျတှလေ့ာရပါတယျ။ ဒါကို ဇရာလို့ သတျမှတျကွပါတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့မို့လို့ အသကျ ၃၀ အရှယျမှာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့တှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာ ဘယျလိုမြိုးပွောငျးလဲမှုတှေ ဖွဈပျေါလာနိုငျမလဲဆိုတာ စာဖတျသူတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ…
ခန်ဓာကိုယျတှငျး ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျလုပျဆောငျမှုတှေ လြော့ကလြာစနေိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ ကြားမမရှေး အသကျအရှယျအိုမငျးခွငျးနဲ့အတူ ပွောငျးလဲလာနိုငျတဲ့ ကိုယျတှငျးဖွဈစဉျတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဇီဝကမ်မဖွဈစဉျ လုပျဆောငျခကျြတှနှေေးကှေးသှားလို့ ခန်ဓာကိုယျမှာလိုအပျတဲ့ အငျအားတှေ၊ စှမျးအငျတှဟောလညျး နှေးကှေးစှာ ဖွဈပျေါလာတော့မှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျကွောငျ့မို့လို့ အငျအားကုနျခမျးတာ၊ အားနညျးတာ၊ ကနျြးမာရေးခြို့ယှငျးလာမှုတှေ စတငျဖွဈပျေါလာတာဖွဈပါတယျ။
အရိုး၊ ကွှကျသားနဲ့ အရှတျတှမှော အားနညျးခွငျးတှေ ဖွဈပျေါလာနိုငျပါတယျ။ အသကျကွီးလာသူတှမှော အမြားဆုံးဖွဈတတျတာက အရိုးတှပြေော့လာတာ၊ အရိုးခဉျြဆီတှေ ခမျးသှားတာ၊ အရိုးတှပေါးလာတာမြိုးတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒူးခေါငျး၊ ခါး၊ ခွလေကျ၊ တံတောငျတှမှောရှိနတေဲ့ အရိုးအဆဈနရောတှကေ အရှတျတှမှောပါးခွငျး၊ အဆီခမျးခွောကျခွငျးတှကွေောငျ့ ကှေးနိုငျ ဆနျ့နိုငျတာမြိုးတှေ လှုပျရှားမှုအားနညျးသှားပါတယျ။ နောကျပွီး အရိုးတှေ တဖွညျးဖွညျးပါးလာတဲ့အခါမှာလညျး ကြိုးလှယျ၊ ထိခိုကျလှယျသှားလို့ အသကျကွီးလာသူတှမှော ခြျောလဲတာ၊ ပွုတျကတြာမြိုးတှဆေိုရငျ တျောရုံနဲ့ ပွနျလညျနလနျမထူနိုငျတော့ပါဘူး။
အရေးအကွောငျးတှဖွေဈလာတာ၊ အရပွေားတှနျ့လာတာမြိုးတှေ ဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျ အရပွေားမြား တှဲကခြွငျး၊ အရပွေားကွှကျသားမြား လြော့ရဲကခြွငျးတှကေ လူကွီးတှနေဲ့ အသကျအရှယျကွီးသူတှမှော တဖွညျးဖွညျး ဖွဈပျေါလာပါတယျ။ အသကျ ၃၀ အရှယျရောကျလာတဲ့ သကျလတျပိုငျးလူတိုငျးမှာ မကျြနှာပွငျပျေါအရေးအကွောငျးနဲ့ အရပွေားတှနျ့လာတာတှကေို စတငျပွီး သတိထားမိလာနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာ ဇရာနဲ့ အသကျအရှယျအိုမငျးခွငျးကို ပွသနတေဲ့ အနီးစပျဆုံးလက်ခဏာပါပဲ။
အမြိုးသမီးတှမှော အသကျ ၃၀ နဲ့ ၃၅ နှဈရောကျလာတဲ့အခါ မြိုးပှားသန်ဓသေားအောငျမှုနှုနျး ကဆြငျးသှားတတျတာကို သတိထားသငျ့ပါတယျ။ အခြို့သော အိမျထောငျသညျတှမှောဆိုရငျ ကလေးနောကျကမြှယူဖို့အတှကျ အသကျ ၃၀ ကြျောဆိုတဲ့အခြိနျကို စောငျ့ဆိုငျးတတျကွပါတယျ။ ဒါဟာ သိပျကို သတိထားဆငျခွငျရမယျ့ အခကျြပါပဲ။ ကလေးယူဖို့အတှကျ မြိုးပှားသန်ဓအေောငျမှုအမွငျ့မားဆုံးဟာ အသကျ ၂၀ နဲ့ ၃၀ ဝနျးကငျြမို့ အသကျ ၃၀ နောကျပိုငျးမှာဆိုရငျတော့ လိုခငျြတိုငျး ကလေးမရနိုငျတော့ပါဘူး။ အမြိုးသမီးဟျောမုနျးဓာတျကဆြငျးခွငျးနဲ့ သန်ဓအေောငျမှုတှေ ကဆြငျးသှားတဲ့အခါ ကလေးရဖို့ ခကျခဲသှားပါတယျ။
စိတျဖိစီးမှုမြား၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာပွဿနာမြား ခံစားလာရတတျပါတယျ။ ပွဿနာတှကွေောငျ့ဖွဈစေ၊ ခံစားခကျြပွငျးထနျလှနျးတာကွောငျ့ဖွဈစေ အသကျ ၃၀ ကြျောအရှယျမှာဆိုရငျ စိတျဖိစီးမှုမြားကို ပိုမိုခံစားတတျကွပါတယျ။ ဦးနှောကျရဲ့အလုပျလုပျဆောငျမှုနှေးကှေးခွငျးကွောငျ့လညျး စိတျခံစားမှုပွဿနာတှကေို ပိုမိုဖွဈပျေါစပေါတယျ။ ဒေါသထှကျတာ၊ စိတျခံစားခကျြလှနျကဲတာ၊ စိတျဓာတျအတကျအကမြားတာတှကေ အသကျ ၃၀ ကြျောအရှယျမှာ အဖွဈမြားပါတယျ။
ကဲအသကျ ၃၀ ကြျောအရှယျရောကျရငျ ဒါတှကေအဖွဈမြားလို့ ငယျရှယျစဉျကတညျးက ကနျြးမာရေးဗဟုသုတတှကေို ရှာမှီးပွီး အသကျအရှယျရလာတဲ့အခါမှာ ကနျြးမာရေးကောငျးနစေဖေို့အတှကျ ကွိုးစားလုပျဆောငျကာ ပြျောရှငျခမျြးမွစှေ့ာနဲ့ ဘဝကိုပြျောပြျောကွီး ဖွတျသနျးကွရအောငျ။